Waa maxay xorriyadda? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan dhawaan booqannay gabadheena iyo qoyskeeda. Kadib waxaan aqriyay jumlada maqaal: "Xorriyaddu maaha maqnaanshaha caqabadaha, laakiin waa karti lagu sameeyo iyada oo aan jacayl loo qabin qof deris ah" (Xaqiiqada 4/09/49). Xoriyadda ayaa ka badan maqnaanshaha caqabadaha!
Waxaan maqalnay khudbado ku saabsan xorriyadda, ama horey ayaan u bartay mawduucan lafteena. Waxa gaarka ah ee ku saabsan bayaankan aniga ahaan, si kastaba ha noqotee, waa in xorriyadda ay la xiriirto reernation. Sida aan u maleyno xorriyadda guud ahaan, kuma xirna in wax laga dhiibto. Taa baddalkeeda, xorriyad la’aan ayaa la mid ah tan dhiibida. Waxaan dareemaynaa inay ku xadidan yihiin xorriyadeena markii si joogto ah caqabado noogu amraan.
Waxay u egtahay sidan nolol maalmeedka:
"Waa inaad hadda kacdaa, waxay ku dhowdahay toddoba saac!"
Hadda waa in la sameeyaa! »
"Isla qaladkii mar labaad ayuu sameeyey, waxba ma bartay?"
"Hadda ma carari kartid, naftaada neceb!"
Waxaan ku aragnaa qaabkan fikirka ah mid si cad uga muuqda wada hadaladii Ciise uu la yeeshay Yuhuudda. Ciise wuxuu ku yidhi Yuhuuddii isaga rumaysatay:
"Haddaad ereygayga ku sii socotaan, runtii waxaad tihiin xertayda oo waad garan doontaan runta, oo runtuna way idin xorayn doontaa." Markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, Annagu waxaan nahay farcankii Ibraahim, oo weligayo addoommo ninna uma ahayn. sideed u dhihi kartaa: waad xorayn doontaa? Ciise wuxuu ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii dembaabaa waa addoonsiga dembiga. Oo addoonkuna guriga kuma sii jiro, wiilkuse waa ku sii jiraa weligiis. Markaa haddii uu wiilku xoreeyey, runtiina xor baad ahaan doontaa ” (Yooxanaa 8,31: 36).
Markii Ciise bilaabay inuu ka hadlo xorriyadda, dhagaystayaashiisu waxay isla markiiba u sujuudeen xaaladda addoon ama addoonka. Addoonku waa ka soo horjeedaa xorriyadda, sida lagu hadlo. Waa inuu sameeyaa isaga oo aan badan, waa nin aad u kooban. Laakiin Ciise wuxuu dhagaystayaashiisa ka fogeynayaa muuqaalkooda xorriyadda. Yuhuuddu waxay rumeysnaayeen inay had iyo jeer xor u ahaayeen, laakiin xilligii Ciise waxay ahaayeen waddan ay ku hoos jireen reer Roomaankii ka horna inta badan waxay ku hoos jireen xukun shisheeye iyo xitaa addoonsiga.
Markaa muxuu Ciise ula jeeday xorriyadda wuu ka duwanaa waxa dhagaystayaashu fahmeen. Addoonsigu wuxuu la mid yahay dembiga. Ku alla kii dembaabaa waa addoonsiga dembiga. Kuwa doonaya inay ku noolaadaan xorriyadda waa in laga xoreeyaa culayska dembiga. Jihadaas, Ciise wuxuu arkaa xorriyadda. Xorriyaddu waa wax ka yimaadda Ciise, waxa suuragal u ah, waxa uu gudbinayo, iyo waxa uu gaadho. Gunaanadku wuxuu noqon lahaa in Ciise qudhiisa uu xornimo qaato, in gabi ahaanba xor yahay. Xoriyad ma siin kartid hadaadan naftaada xor aheyn. Markaa haddaan sifiican u fahamno dabeecadda Ciise, waxaan sidoo kale si fiican u fahmi doonnaa xorriyadda. Muuqaal cajiib ah ayaa ina tusaya waxa asalka Ciise yahay iyo siduu ahaa.
Fikirka noocan oo kale ah ayaa dhammaantiin idinku dhex jira, sidii Masiixu Ciise Masiix ugu dhex jiray, waayo, in kastoo uu isagu Eebbe Ilaah yahay (dabeecadda rabbaaniga ah ama dabeecadda), uma uusan arkin inuu la sinnaado Ilaah inuu yahay boob lagu qabto xoog (hanti aan la qaadan karin, hanti qaali ah); maya ayuu is yidhi (sharaftiisa) adoo qaatay qaab addoonkaaga, gebi ahaanba galay dabeecadda aadanaha iyo in lagu khiyaaneeyey dabiici ahaan jireed sida aadanaha oo kale " (Pilippers 2,5-7).
Muuqaal caan ah oo ka mid ah dabeecadda ciise waxaay ahayd magacaabistiisa oo ah maqaalkiisa rabbaaniga ah “Wuxuu sii daayay” sharaftiisa wuxuuna si mutadawacnimo ah uga tanaasulay awooddan iyo sharaftiisa. Wuxuu dhiibtay hantidan qaaliga ah taasina waa ta saxda ah waxa u sahasha inuu noqdo Bixiye, mid xaliya, kan xoreeya, oo xorriyadda suurto geliya, kaasoo dadka kale ka caawin kara xorriyadda. Tanaasulida mudnaantani waa astaan ​​muhiim ah oo xorriyadda leh. Waa inaan si qoto dheer ula macaamilaa xaqiiqda. Laba tusaale oo Bawlos ah ayaa tan iga caawiyay.
Miyaadan ogayn in kuwa orodka ku tartamaya ay dhamaantood ordaan, laakiin mid keliya ayaa hela qiimaha guusha? Haatan u orda hab aad ku heli kartid! Ka fogaanshaha cilaaqaadyada oo dhan, kuwa hela gogol dhaaf ah, laakiin annagu waa wax aan dhammaanaynin " (1 Korintos 9,24: 25).
Orodyahan ayaa dhigay yool wuxuuna doonayaa inuu gaaro. Waxaan sidoo kale ku lug leenahay socodsiintaan waana loo baahan yahay tanaasul. (Tarjumaadda Rajada oo Loogu Talo Galayaa Dhammaan waxay ka hadlaysaa weedhan recaationation) Kaliya maaha ku saabsan midaynta yar, laakiin waxay ku saabsan tahay "ka fogaanshaha xiriirka oo dhan". Sida Ciise u diiday heshiis weyn si uu ugu gudbi karo xorriyadda, waxaa naloogu yeeray inaan ka tagno waxyaabo badan si aan sidoo kale ugu gudbi karno xorriyadda. Waxaa naloogu yeedhay waddada cusub ee nolosha oo horseedaysa ubax aan dhammayn karin oo weligeed sii jira; ammaanta aan weligeed dhammaanayn ama tegi doonin. Tusaalaha labaad wuxuu si dhaw ulaxirmayaa kan koowaad. Waxaa lagu sharaxay isla cutubka.
Miyaanan xor ahayn? Miyaanan rasuul ahayn? Miyaanan arkin Rabbigeenna Ciise? Miyeydnaan ahayn shuqulkayga xagga Rabbiga? Miyaannan rasuullada u lahayn wax cuna ama wax cabbo? (1 Korintos 9, 1, iyo 4).
Halkan Bawlos wuxuu isku sharaxay inuu yahay nin xor ah! Wuxuu isku sharaxay inuu yahay qof arkay Ciise, mid u shaqeeya magaca xoreynta iyo waliba natiijooyin muuqda oo muuqata. Iyo aayadaha soo socda wuxuu qeexayaa xaq, hordhac ah, oo isagu, sida dhammaan rasuullada iyo wacdiyadaba, uu leeyahay, taas oo ah inuu noloshiisa ku noolaado isagoo ku wacdiyaya injiilka, inuu xaq u leeyahay dakhli. (Aayadda 14) Bawlos waxa uu ka leexday mudnaantan. Iyada oo loo marayo ka-dhaafitaankan, wuxuu abuuray meel bannaan, oo sidaas darteed wuxuu dareemay xorriyad wuxuuna isu yeeri karaa qof xor ah. Go'aankaan wuxuu ka dhigay mid ka madaxbanaan sidii hore. Wuxuu ka hirgaliyey qaanuunkan dhamaan degmooyinka marka laga reebo degmada Filibiin. Wuxuu u oggolaaday bulshadaan inay daryeelaan caafimaad qabkiisa. Qaybtan, si kastaba ha noqotee, waxaan hadda helnay meel u muuqata xoogaa wax la yaab leh.
"Maxaa yeelay markaan wacdiyo badbaadada, anigu sabab uma lihi inaan ku faaniyo, maxaa yeelay waxaan ku jiraa qasab; waa hoog haddii aan ku wacdiyo farriinta badbaadada!" (Aayadda 14).
Bawlos, sidii nin xorta ah, wuxuu ku hadlaa khasab, wax ay ahayd inuu sameeyo! Sidee taasi u suurtagashay? Miyuu arkay mabda'a xorriyadda si aan cadayn? Waxaan u malaynayaa inuu doonayo inuu nagu soo dhoweeyo xorriyadda isaga oo adeegsanaya tusaalaha. Waxaan ku sii wadaynaa aqrinta:
Sababta oo ah kaliya haddii aan tan ku sameeyo ikhtiyaarkayga ikhtiyaariga ah, waan haystaa (Xuquuqda) mushaharka; laakiin haddaan si kaste ku sameeyo, waa wakiilnimo oo aniga laygu aaminay. Haddaba waa maxay mushaharkeygu? Taasoo ah, anniga oo ah mid dadka injiilka u ah injiilka badbaadada, waxaan ku bixinayaa bilaash, si aanan u isticmaalin xuquuqdayda inaan ku wacdiyo farriinta badbaadada. Sababtoo ah inkasta oo aan ka madaxbanaan ahay dadka oo dhan (bilaash), waxaan ka dhigtay naftayda inaan u noqdo mid mid dhammaan u wada shaqeeya si aan ugu guuleysto inteeda badan. Laakiin waxaan waxan oo dhan ugu sameeyaa warkayga bogsiinta, si aan aniguna ugu dhex faafo " (1 Korintos 9,17: 19-23 iyo).
Bawlos wuxuu ka helay shaqo Eebbe wuxuuna si fiican u garanayay inay waajib ku tahay inuu sidaas sameeyo Ilaah; wuxuu ku qasbanaaday inuu sameeyo, ma uusan ka qarsoomi karin tan. Wuxuu naftiisa u arkay doorkan inuu yahay wakiilka ama maamulaha isagoo aan sheegan mushahar. Xaaladda jirta, si kastaba ha noqotee, Bawlos wuxuu helay meel bannaan oo lacag la’aan ah, in kasta oo caqabaddani jirto wuxuu arkay meel ballaaran oo xorriyadda lagu helo. Wuxuu ka tanaasulay magdhow shaqadiisii. Xitaa wuxuu naftiisa u yeelay mid addoon ama mid addoomo ah qof kasta. Wuxuu la qabsaday duruufaha; iyo dadkii uu injiilka ku wacdiyey. Markuu dayacay magdhow, wuxuu awoodey inuu la xiriiro dad badan oo dheeri ah. Dadkii maqlay warkiisa waxay si cad u arkeen in fariinta aysan aheyn mid soo gabagabeynaysa lafteeda, kobcinta ama khayaanada. Dibadda, Bawlos wuxuu u ekaa qof cadaadis joogto ah iyo ballan qaad joogto ah. Laakiin Bawlos kuma xidhnayn gudaha, wuxuu ahaa madax-bannaan, waa xor. Sidee taasi ku dhacday? Aynu daqiiqad ku soo noqonno marinka koowaad ee aan wada akhrino.
"Ciise ayaa ugu jawaabay, Runtii, runtii waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii dembaabaa waa addoonsiga dembiga. Laakiin addoonku weligiis guriga kuma sii jiro, wiilkuna weligiis wuu ku sii jiraa" (Yooxanaa 8,34-35).
Muxuu Ciise ugala jeedaa "guri" halkan? Muxuu ula jeedaa guri? Guri wuxuu xiraa amniga. Aynu ka fikirno hadalkii Ciise ee ahaa in gurigii aabihiis guryo badan loo diyaariyey carruurta Ilaah. (Yooxanaa 14) Bawlos wuu ogaa inuu ilmo Ilaah yahay, oo uusan ahayn addoonka dembiga. Mowqifkaan ayuu ka bad baaday (Sealed?) Ka-dhaafitaankiisii ​​magdhow shaqadiisii ​​waxay u keentay inuu aad ugu dhowaado Ilaah iyo amniga uu Ilaahay oo keliya gudbin karo. Bawlos wuxuu aad ugu dadaalay xorriyaddaas. Ka tanaasulida mudnaanta ayaa muhiim u ahayd Bawlos maxaa yeelay waxay isaga siisay xorriyad rabbaaniga ah, taas oo lagu muujiyay nabadgelyada Ilaah. Bawlos wuxuu ku soo qaatay ammaankan noloshiisa dunidan, wuxuuna Ilaah uga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar labaad iyo waraaqihiisii ​​ereyada "In Masiixa" tilmaamay. Wuxuu si qoto dheer u ogaa in xorriyadda rabbaaniga ah ay suurto galisay oo keliya ciilkii Ciise ee dowladiisa rabbaaniga ah
Ku dhawaaqida jacaylka deriska ayaa fure u ah xorriyadda uu Ciise ula jeedo.
Xaqiiqadani waa inay sidoo kale noo noqotaa mid noo caddeeya maalin kasta. Ciise, rasuulladii iyo masiixiyiintii ugu horeeyey ayaa na siisay tusaale. Waxay arkeen in magacaabistooda ay ku wareegayaan goobo ballaaran. Dad badan ayaa taabtay magac bixinta jacaylka dadka kale. Way dhegaysteen farriinta, waxay aqbaleen xorriyadda rabbaaniga ah, maxaa yeelay waxay fiirinayeen mustaqbal, sidii Bawlos u dhigay:
"... in iyada lafteeda, abuurka, laga xoreyn doono addoonsiga ku-meel-gaarka ah Xorriyadda ay carruurta Ilaah ku yeelan doonaan gobolka sharafta. Waan ognahay in abuurka oo dhan uu weli taahdo meel walba oo uu sugayo dhalasho cusub oo leh xanuun. Laakiin iyaga oo keliya ma aha, laakiin sidoo kale innaga qudheenna, oo hore u lahaa Ruuxa hadiyad ahaan, ayaannu sidoo kale u taahaynaa gudaha markaan sugnaa (soo muuqashada) carruurnimada, taas oo ah furashada nolosheena " (Rooma 8,21-23).
Ilaah xorriyadda ayuu siiyaa carruurtiisa. Waa qayb aad u khaas ah oo carruurta Ilaah helaan. Xannaanaynta carruurtu Eebbe ka yeelo sadaqadda ayaa ka badan magdhawga nabadgelyada, degganaanta, degganaanta ka timaadda xagga Eebbe. Haddii qofku aanu ka lahayn ammaankan, markaa wuxuu raadinayaa madax-bannaani, u-tanaasulid u eg yahay madax-bannaani. Wuxuu rabaa inuu nafsadiisa go’aansado wuxuuna ugu yeeraa xorriyad. Imisaxanuun baa horay u dhashay. Silica, baahida iyo faaruqinta ka dhashay is fahan la'aanta xorriyadda.
Sida carruurta dhasha ah, waxay jecel yihiin caqli gal, caano aan duubnayn (waxaan ugu yeeri karnaa xorriyaddan caano) si aad ugu koraan barako haddii aad dareento haddii kale in Eebbe naxariis leeyahay. Isaga u tag, dhagaxa nool oo binu-aadmiga loo diiday, laakiinse Ilaah hortiis loo doortay, waa qaali, oo naftaaduna ha kuu dhismo sidii dhagaxyo nool oo sidii guri ruux ah (meeshuu aaminku ka dhashaa) wadaaddo quduus ah oo sameeya allabaryo ruuxi ah (taasi waxay noqonaysaa iska dhaaf) in Ilaah ku farxo xagga Ciise Masiix! (1 Butros 2,2: 6).
Haddii aan ku dadaalno xorriyadda rabbaaniga ah, waxaan ku koray nimco iyo aqoon.
Ugu dambayntii, waxaan jecelahay inaan soo xigto laba weedho oo ka soo jeeda maqaalka aan ka helay dhiirrigelinta wacdinta: «Xorriyaddu maaha maqnaanshaha caqabadaha, laakiin waa karti lagu sameeyo jacayl la’aan daris darisnimo. Qof kasta oo xorriyadda u qeexaya maqnaanshaha qasabka ahi wuxuu dadka ka horjoogsanayaa inay ku nastaan ​​amniga barnaamijyadana niyad jab.
Xoriyadda ayaa ka badan maqnaanshaha caqabadaha